Wareysi lala yeesho Jack Dangermond - Geofumadas
Wareysi lala yeesho Jack Dangermond
Luulyo, 2008 ArcGIS-ESRI, tabo cusub
Markaanu dhawr maalmood ka maqneyn shirarka isticmaalaha ee ESRI, halkan waxaan ku turjumeynaa wareysiga lagu sameeyey Jack Dangermond oo noo sheegaya inaan sugi karno ArcGIS 9.4.
Maxay yihiin qorshooyinka ku jira qaybta xigta ee ArcGIS 9.3?
Qaabka soo socda ee ArcGIS (9.4) wuxuu diiradda saari doonaa afar qeybood oo soo socda:
Continue si loo ballaariyo awoodaha ee Server ArcGIS ku saabsan dhufto, scalability iyo ammaanka iyada oo diiradda la saarayo UNIX / Linux iyo Java awoodaha taageero, khariidado firfircoon, iyo taageero ku hodanaynta codsiyada Internet (hayalka san), ayaa sidoo kale wax Server Tracking .
Wax-soo-saarka xirfadlayaasha ArcGIS
Hagaajinta waayo aragnimada isticmaale, geedi socodka hagaajinta u socota si kor loogu qaado wax soo saarka, iyo kor u qaadista iskaashiga leh wadaagidda xogta si sahlan. Waxaa jira horumarin la qorsheeyay oo ku saabsan moodeelka horumarsan, falanqaynta 4D iyo aragtida, qoraalka khariidadda, qaabka aan caadiga ahayn iyo sifooyinka ku habboon, iyo kuwo kale.
U oggolow horumarinta codsiyada juquraafiyadeed deg deg ah. Dhisidda kartida cusub ee ArcGIS 9.3, sii deynta soo socota waxay sii wadi doontaa in ay ballaariso howlaha si fudud oo degdeg ahna loo geeyo codsiyada shirkadda. In ArcGIS Explorer, muuqaal cusub oo ka mid ah interface user, 2D iyo isdhexgalka 3D, iyo qaababka wada-shaqeynta ee la qorsheeyey. In ArcGIS online, hagaajinta waxaa ka mid ah jidadka iyo navigation, iyo sidoo kale taageero GPS ee heer xirfadeed dheeraad ah.
Xalka GIS ee dadka isticmaala ganacsiga
ArcGIS 9.4 waxay kordhineysaa xalka ay bixiso dalabyo dalxiis oo loogu talagalay ganacsiga iyo sahayda. Iyada oo ay ku jiraan suurtagalinta Ganacsiga Ganacsiga, Ganacsiga Ganacsiga Ganacsigga ah waxaa loo hirgelin doonaa Bandhiga Ganacsiga Ganacsiga Ganacsiga. Xalka Saadka (ArcLogistics), Falanqaynta Shabakada iyo StreetMap Mobile ayaa sidoo kale la qorsheeyey.
Goorma ayuu ESRI u ogolaanayaa rukhsadaha in la isticmaalo oo laga reebo Maareeyaha Maareynta Dhexe?
ArcGIS 9.4 waxay taageeri doontaa awoodda inay "hubiso" shatiga oo ay u qaadaan beerta ku haynaysa in aysan si firfircoon u shaqeynin server-ka shatiga dhexe.
Ma waxaad ka fekereysaa inaad ka saarto habka ilaalinta shatiga ee liistada?
Haa: Mid ka mid ah xirmooyinka adeega (post 9.3), ESRI waxay aqbali doontaa awoodda isticmaalka maareeyaha liisan iyada oo aan lahayn qulqulo, Windows iyo Linux
Goorma ayaad fulin doontaa tifaftiraha metadata ee tifaftireyaasha ArcCatalog?
Waxaan dib u dhisi doonaa tifaftiraha metadata oo qayb ka ah kordhinta waxqabadka ArcGIS 9.4 labadaba abuurista iyo la qabsashada iyo wadaagidda metadata.
Maxay ESRI u siisaa xooga saarka badan ArcGIS Server?
Jawaabta ugu fudud waxay tahay in aan aragno in adeegyadda geospatial iyo tiknooloojiyada ku salaysan server-ka ay tahay mid ka mid ah isbeddellada ugu muhiimsan ee warshadeenna. ArcGIS Server waa fikirka ugu fiican ee nuqulada server-ku-saleysan ee GIS-ka iyo iyadoo tan ay isku-dhafan tahay waxqabadka sare ee khariidadaha webka, waxaan raadineynaa fulinta adeegyada adeegyada guud ee dhammaan ArcGIS iyo qalabka.
Deegaankani heerkiisu yahay server-ka wuxuu taageersan yahay adeega shabakada "out-of-box-box", (tusaale, khariidadaha raajada ah, adeega balloonada 3D, geoprocessing, iwm). Waxa kale oo ay la shaqaysaa kaydinta macaamiisha webka iyo daalacayaasha, joornaal-bixiyeyaasha iyo deegaannada gacanta, dabcan waxaa sidoo kale jira goobaha shaqada ee caadiga ah.
Waqti ka dib, waxaan aaminsanahay in tiknoolajiyada server-ka GIS ay iman doonto si loo hagaajiyo mashaariicda adeegsigeena. Waxay u ogolaaneysaa inay shaqadooda si fiican u shaqeeyaan oo ay sii wanaajiyaan una horumariyaan GIS si loo kordhiyo tirada dadka isticmaala.
ESRI ma siin doonaa taageerada Flex ee ArcGIS Server?
Iyadoo la raacayo ArcGIS API ee Flex, horumariye wuxuu:
Muuji map khariidad leh macluumaadkaaga
Samee habka GIS oo ku saabsan server iyo natiijooyinka bandhig
Muuji xogtaada khariidadda saldhigga ArcGIS online
Raadinta sifooyinka ku jira xogtaada GIS iyo natiijooyinka bandhig
Abaabul mashuucyada (isku dar macluumaadka laga helo ilaha webka badan)
Eeg sida City City ay u isticmaalayso ArcGIS API ee Frex ee codsiyada Solar Boston
Ugu horreyntii, ArcGIS API ee Flex ayaa lahaan doona version beta. Kulan gaar ah oo ay la yeesheen koox xiiso leh oo ka tirsan Adobe Flex ayaa la qorsheynayaa bisha August 5, waxay noqon doontaa qolka qolka 15A SDCC.
Maxay tahay talooyinka ESRI ee isticmaalka sahlan ee qalabka edbinta (casriyeynta)?
Inkasta oo ay jiraan tiro ka mid ah codsiyada saddexaad ee soo dhistay awoodda wax qabad ee ArcGIS, waxaa jira afar "box-ready" oo hadda la heli karo oo loo adeegsado ESRI:
ArcGIS Desktop iyadoo la adeegsanayo ficil-celinta xogta geodatabase iyo Microsoft "khadka"
ArcRerer leh awoodda casriyeynta
ArcPad leh karti-u-helid
WebMap oo wax laga beddelayo lakabyada calaamadaha
In ArcGIS 9.4, ESRI waxay qorsheyneysaa in ay ku darto qalab dheeri ah oo loo ogolaado wadaagista qoraallada iyo calaamadaha.
ArcPad si toos ah iskugu duubi kartaa geodatabase?
Haa, oo leh ArcPad 7.2, oo laga heli karo qaybta beta ee shirka isticmaalaha, fasalada muusikada iyo jadwalkooda la xiriira waxaa lagu daabici karaa si toos ah geodatabase iyada oo la adeegsanayo ArcGIS Server. Nuqulada qaybtaas ayaa si toos ah u xajin karta mid ama dhowr ka mid ah dadka isticmaala ArcPad.
Ma taageeri doonaan ArcView GIS 3.x ee Microsoft Windows Vista?
Maya. Sababtoo ah isbeddelada tiknoolijiyada Windows Vista ma taageeri karo ArcView 3.x. ArcView 3.3 ayaa sii wadi doona taageerada Windows XP, inkastoo aanu bixinayno cusbooneysiin ama isbedel.
Maxay tahay ESRI si loo hirgeliyo tayada iyo degganaanshaha barnaamijka?
Qeybta 9.3 ee ArcGIS waxay la kulantay shuruudo badan oo tayo leh, si kastaba ha ahaatee, waxaan weli u baahanahay inaan bedelno. Isbeddelada nambarka 9.3 waxaa lagu darayaa qaybaha adeegga ee xiga. Waxaan diirada saarnaa tayada waxay ku jiri doontaa waxyaabaha soo socda:
Imtixaan dheeraad ah
Jawaabta degdegga ah ee loo baahanyahay
Cusbooneysiinta marxaladaha adeegga adeegga (bil kasta 3-4)
Isdhexgalka kooxda taageerada farsamada ESRI iyo kooxaha horumarinta
Macluumaad fiican oo ku saabsan heerarka tayada ee lagu daabacay webka (maqaallada aasaasiga ah ee aqoonta, liiska cayayaanka la beddelay, iwm)
Waxaan sii wadi doonaa inaan diirada saarno fulinta tayada softwarekeena: rakibida, isticmaalka codsiyada, dukumiintiyada, warbixinta qaladka iyo miisaanka. Nidaamkeena hagaajinta wuxuu diiradda saari doonaa sidii loo hubin lahaa tayada ugu sarreysa ee xirmooyinka adeegga xiga ee ArcGIS 9.3.
Waa maxay ESRI wax ka qabashada jawiga Flex? Tani waxay noqon doontaa qayb ka mid ah sheyga mustaqbalka?
ESRI waxay horumarisay, iyada oo qayb ka ah ArcGIS Server 9.3, oo ah API dhamaystiran oo loogu talagalay codsiyada internetka ee Flex. Deegaankani wuxuu siinayaa fursad xoog badan oo loogu talagalay isticmaaleyaasheena si loo dhiso interfaces aad u dhexgalaan dadka isticmaala arjiyada codsigooda.
ArcGIS API ee Flex ayaa loo heli doonaa sida bilaash ah oo laga helo Xarunta Khayraadka Macmiilka ee ArcGIS. ESRI waxay sameyn doontaa API this dadweynaha inta lagu guda jiro Shirka User. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, booqo kooxda xiisaha leh ee Adobe Flex ee 5 ee Agoosto duhurnimadii 5 ee Agoosto ee qolka 15A SDC.
Post Previous«Previous Ku xir dhulka Dunida leh ArcGIS 9.3
Post Next Ku daabac adeegyada OGC ee GvSIGNext »